Ixesha kunye nabahlobo 1
Singazixela ukuba yintoni esi besikumzimba wethu wokugqibela? ubuze undwendwe ngobunye ubusuku emva kwentetho.
Ekuphela kwendlela yokuxela kukwazi ngokuqinisekileyo ukuba saphila ngubani ngaphambili. I-faculty apho luza khona olu lwazi yinkumbulo, yolungelelwano oluphezulu. Xa kungekho loo nto, umntu ngamnye unokwenza uqikelelo lwento awayeyiyo ngaphambili ngezinto azithandayo ngoku. Kusengqiqweni ukucinga ukuba, ukuba sinokhetho kulo mbandela, besingayi kukhetha imeko okanye iimeko esasiza kuza nazo, ezinje ngokungafanelekanga kwizinto esizithandayo okanye kuphuhliso kwaye, kwelinye icala, ukuba Asinakho ukukhetha ke, umthetho olawula ukuvela ngokutsha awunakusibeka kwiimeko ezingakulungelanga ukuphuculwa.
Siziva sinovelwano okanye sichasene neenjongo ezithile, abalinganiswa, iindidi zabantu, iindidi zabantu, imisebenzi yezandla, ubuchule, ubugcisa kunye nomsebenzi, kwaye oku kuyakubonisa ukuba besikusebenzile okanye sichasene nezi ngaphambili. Ukuba siziva sisekhaya okanye sigula-kukhululeka kuluntu olulungileyo okanye olubi, oko kuyayibonisa into ebesiyiqhele ngaphambili. Ukunyathela, eqhele ukuziqhekeza elangeni kwindawo endala okanye kwindlela enothuli, ngekhe azive ekhululekile ekuhlaleni, kwelebhu yasokhemesti, okanye kwirostrum. Kananjalo umntu ebeyindoda ekhutheleyo, ekhutheleyo, ngentliziyo okanye ngentanda-bulumko, angaziva ekhululekile kwaye ekuzonwabiseni kwelanga, engahlanjwa, enxibe iimpahla ezirhabaxa.
Sisenokulawula ngokuchanekileyo oko besikuko ebomini obudlulileyo hayi ngobutyebi okanye isikhundla ngoku, kodwa koko izinto zethu, izilangazelelo zethu, ukuthanda kwethu, ukungathandi, ukulawula inkanuko.
Umzimba uzelwe umzimba uyafa. Umphefumlo awuzalwa ungafanga, kodwa ungene emzimbeni ozelwe ushiye umzimba ekufeni komzimba.
Ukwazi ukuba mangakanani umphefumlo owutchithileyo kulo mhlaba, jonga kwizizwe ezahlukeneyo ngoku emhlabeni. Cinga ngokuziphatha, ingqondo kunye nokukhula ngokomoya komntu wase-Afrika, okanye iSouth Sea Islander; kwaye ke kweNewton, Shakespeare, Plato, Buddha, okanye Christ. Phakathi kwezi zinto zigqithileyo cinga ngamanqanaba ahlukeneyo ophuhliso oluhanjiswayo ngabantu. Emva kwalombuzo buza ukuba ngubani u "Ndi" ume phakathi kwezi zinto zigqithileyo.
Emva kokujika isikhundla ukuze ubone ukuba "ndi" ndifunde ntoni kumava obu bomi bangoku-umntu oqhelekileyo ufunda kodwa kuncinci-kwaye uyenza kanjani "into" endiyifundileyo. Emva kwalombuzo unomdla, sisenokubumba umbono wenani lamaxesha ekuya kufuneka ukuba ngawo kuye kwaphilwa kuwo ukuze ube ufikelele nakwilizwe langoku.
Akukho ndlela yokuba umntu omnye axele ukuba mangaphi amaxesha awayehlala ngaphambili ngaphandle kolwazi lokwenyani kunye nokuqhubeka nokwazi kwangaphambili. Ukuba uxelelwe ukuba uphila kabini okanye ngamashumi amahlanu amawaka ulwazi alunakumnceda, kwaye ngekhe akwazi ukuluqinisekisa ngaphandle kolwazi oluphuma kumphefumlo wakhe. Kodwa ngomzekeliso osinikiweyo sinokubona umbono othile wezigidi zeminyaka ekufuneka ukuba sifikelele kuwo ngoku.
Singo. Asiboni ngohlobo olufanayo nolwexesha lethu ebomini. Eli lizwe ngumhlaba wokusebenza. Kuyo umntu uhlala kwaye uhamba kwaye ucinga. Indoda sisidalwa esenziwe okanye senziwa ngamadoda asixhenxe okanye imigaqo. Ekufeni isahlulo somntu somntu sezahlulahlulo sesahlulo sezinto ezibonakalayo, kwaye imigaqo-nkqubo yaphezulu okanye amadoda ke ahlala kwimeko okanye imeko ekugqitywe ngayo ziingcinga kunye nezenzo ngobomi bonke. Le migaqo kaThixo yingqondo, umphefumlo kunye nomoya, othi, kunye neminqweno ephezulu, udlulele kwimeko elungileyo egqitywe bubomi emhlabeni. Le meko ayinakubangaphezulu kuneengcinga okanye iingqondo ebomini. Njengoko le migaqo isuswe kwisahlulo sezinto ezibonakalayo ezibuthathaka abazi babububi bobomi. Kodwa bayazi, kwaye baphile ngokweengcinga ezisisiseko ngexesha lokuphela kobomi. Eli lixesha lokuphumla, eliyimfuneko kwinkqubela phambili yomphefumlo njengokuphumla ebusuku kuyimfuneko ukuze kulingane umzimba nengqondo yemisebenzi yosuku oluzayo.
Ekufeni, ukwahlulahlulwa koThixo kwimigaqo yokufa kuvumela ubumnandi babaphilayo ngaphandle kweenjongo. Le yimeko eyaziwayo phakathi kokuvela ngokutsha.
Nanini na xa lo mbuzo ubuzwa ngumthiyosophisi ubangele uncumo, kuba nangona umbono ka-Adam no-Eva bengabantu bokuqala abaphila kweli lizwe uboniswe ukungabinakho kophando lwenzululwazi yale mihla, kodwa umbuzo ngokuqinisekileyo rhoqo kuza.
Indoda enolwazi iya kuthi kwangoko ithi indaleko ibonise ukuba le ntsomi iyintsomi. I-theosophist iyavumelana noku, kodwa isithi imbali yokuqala yoluntu igcinwe kule ntsomi okanye intsomi. Imfundiso yeemfihlo ibonisa ukuba usapho loluntu kwimeko yalo yokuqala kunye neyasekuqaleni yayingekho njengoko injalo ngoku, yenziwa ngamadoda nabafazi, kodwa ke oko kwakungekho sini. Okokuthi ngokuthe ngcembe kuphuhliso lwendalo isibini okanye isondo le-hermaphroditism, lakhula kumntu ngamnye. Okwangoku kamva yaphuhliswa ngokwesini, apho ulwahlulo loluntu ngoku lwahlulwe.
UAdam noEva akuthethi ukuba indoda enye kunye nomfazi omnye, kodwa lonke uluntu. Mna nawe ndinguAdam noEva. Ukuvela ngokutsha kuka-Adam no-Eva kukuvela ngokutsha komphefumlo womntu kwimizimba emininzi eyahlukeneyo, kumazwe amaninzi, nangokungena kwizizwe ezininzi.
Kuyatshiwo ukuba ixesha phakathi komzimba wokuzala, okanye ukusukela ngexesha lokufa komzimba omnye de umphefumlo wakhe wathatha indawo yokuhlala komnye ozelwe emhlabeni, yiminyaka elikhulu elinesihlanu elinesihlanu. Kodwa oku akusebenzi kubo bonke abantu, kwaye ngakumbi kungenzeki kwindoda yanamhlanje yasentshona-inengqondo.
Indoda elungileyo elangazelela izulu, esenza imisebenzi elungileyo kulomhlaba kwaye ineembono kunye nomfanekiso ocacileyo, umntu onqwenela ixesha elingapheliyo ezulwini, unokuba nelizulu ixesha likhulu, kodwa kukhuselekile ukuthi lonto hayi indoda ephakathi kule mihla.
Ubomi kweli lizwe yintsimi yesenzo apho imbewu ihlwayelwa khona. Izulu yimeko okanye imeko yokuphumla apho ingqondo iphumle khona ekusebenzeni kwayo kwaye isebenze ebomini ukuba iphinde iphinde yenzeke. Ixesha emva kokuba ingqondo iphinde ibuyiselwe kukuxhomekeka kwinto eyenzileyo ebomini kunye nalapho ibeke khona ingcinga, kuba naphi na apho umbono okanye umnqweno ukho kuloo ndawo okanye imeko ingqondo iya kuyo. Ixesha alifanelanga ukulinganiswa yiminyaka yethu, kodwa kunokuba ngumgangatho wengqondo wokuzonwabisa kwimisetyenzana okanye ukuphumla. Umzuzwana ngaxeshanye ubonakala ngathi ungonaphakade. Omnye umzuzu udlula njengombane. Umlinganiso wethu wexesha, ke, awukho kwiintsuku nakwiminyaka ezayo kwaye ehamba, kodwa kwisikhundla sokwenza ezi ntsuku okanye iminyaka ibe mide okanye imfutshane.
Ixesha elimiselwe ukuhlala kwethu ezulwini phakathi kokuvela ngokutsha. Umntu ngamnye uzityumba ngokwakhe. Umntu ngamnye uphila ubomi bakhe. Ngokukodwa njengoko nganye yahluka ngokweenkcukacha kwenye nenye ingcaciso engenangcaciso malunga nexesha elinokwenziwa ngaphandle kokuba elowo wenza ixesha lakhe ngokwakhe ngeengcinga zakhe kunye nezenzo, kwaye mde okanye mfutshane njengoko esenza. Kuyenzeka ukuba umntu azalwe ngokutsha kwisithuba esingaphantsi konyaka, nangona oku kungaqhelekanga, okanye ukwandisa ixesha kangangeenkulungwane.
Senza ngendlela efanayo ukuba sitshintsha isuti yempahla xa sele siyisebenzisile injongo yayo kwaye akusekho mfuneko. Ubuntu benziwa ngezinto ezisisiseko ezidityanisiweyo zaba yimo, zaphakanyiswa ngumgaqo wobomi, zalathiswa kwaye zakhuthaza umnqweno, ngezigaba zangaphantsi zengqondo ezisebenza kuyo ngokusebenzisa iimvakalelo ezintlanu. Le yindibaniselwano esiyibiza ubuntu. Ihlala kuphela kwithuba leminyaka ukusuka ekuzalweni ukuya ekufeni; ukusebenza njengesixhobo esisebenza kwaye ingqondo isebenza kuyo, inxibelelana nehlabathi, kwaye amava obomi kuwo. Ekufeni, obu buntu bubekwa ecaleni kwaye babuyela kwizinto zobugqi zomhlaba, amanzi, umoya, nomlilo, ezazitsalwe zaza zahlanganiswa. Ingqondo yomntu ke idlulela kwimeko yayo yokuphumla emva kokuyonwabela eyakha kwaye ingena obunye ubuntu ukuze baqhubeke nemfundo kunye namava abo kwihlabathi.